किन अरेबियन महिलाहरु हुन्छन यति सुन्दर ? यस्तो छ सुन्दर हुनुको रहस्य - DuterteBlog
किन अरेबियन महिलाहरु हुन्छन यति सुन्दर ? यस्तो छ सुन्दर हुनुको रहस्य
सुन्दरताको कुरा गर्दा अरबेयिन महिलाहरुको प्रसंग जोड्ने गरिन्छ । हुनपनि बान्की मिलेको अनुहार, छालाको चमक, आँखाको तेज, मुलायम एंव रसिलो ओंठ आदिले उनीहरुको सौन्दर्य खुल्ने गर्छ ।सवैले स्विकारेका छन् कि, अरेबियन महिलाहरुको छाला अन्य देशका महिलाहरुको तुलनामा धेरै सुन्दर र स्वस्थ्य हुन्छ । यी महिलाहरुको छाला मात्र हैन कपाल पनि उत्तिकै सुन्दर हुन्छ ।
नरम र चम्किलो छालाको लागि अरेबियन महिलाहरु विशेष किसिमको तेलले दिनहुँ मसाज गर्नुको साथै शरीरमा स्टीम दिने गर्छन् । यसको साथै तातो पानीमा शरीरलाई घण्टौं डुबाएर राख्ने गर्छन् ।
अष्ट्रेलियालाई पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड विश्वकपको फाइनलमा
युवराज चार्ल्सबाट गोर्खालाई पदक – H Khabar